Maitiro ekudzima COVID-19 yekutsvaga yekutevera | IPhone nhau
Maitiro ekudzima COVID-19 yekutsvaga yekutevera
Apple neGoogle vakazivisa chibvumirano mavhiki mashoma apfuura ekushandisa a zvakavanzika uye zvakachengeteka zvakakwana yekutevera system kuziva kana isu takaratidzwa kune coronavirus. Uku kuteedzera, ini ndinodzokorora zvachose kusazivikanwa, kunoitwa kuburikidza neBluetooth (kwete GPS) inosvika pane iyo iPhone nekutanga kweIOS 13.5.
Nezuro masikati, nguva yeSpanish, Apple yakaburitsa yechitatu beta iOS 13.5, beta iyo inosanganisira hukuru hukuru hune hukama necoronavirus. Aya mashandiro anotendera tevera yedu nzvimbo kusiyanisa nevanhu munharaunda medu, kuteedzera izvo zvinotibvumidza isu kuziva kana isu tave padyo nemunhu akabatwa necoronavirus.
Iyo yekutevera inoitwa neyedu kifaa inonzi "Kujekesa Notification" pane iyo iPhone uye inogoneswa nekutadza patinoisa iOS 13.5. Nekudaro, izvo zvinofanirwa kutarisirwa kuti chete mashandisiro evatungamiriri vehutano ehurumende anogona kuishandisa, hapana mvumo yekuvandudza angave nekwaniso yeichi chiitiko.
Uye zvakare, kana isu tangoisa inoenderana kunyorera, izvi Izvo zvichatikumbira isu kuwana pachena kuti tikwanise kuunganidza data kuburikidza neBluetooth. Pakutanga, chikamu chekutanga chekutumirwa chinotarisirwa kuti chiitwe kutanga kwaMay, saka kuburitswa kweshanduro yekupedzisira yeIOS 13.5 hakufanirwe kutora nguva.
Chekutanga chinodikanwa ndechekuti mudziyo wedu unotarisirwa neIOS 13.5 kana kupfuura, nekuti basa iri harisi kuwanikwa mushanduro dzekare dzeIOS.
Kutanga, isu tinofanirwa kuwana marongero e Privacy.
Tevere, tinya pane Utano.
Mukati mehutano, tinya pane yekutanga sarudzo ine zita: COVID-19 Kuratidzira Kuzivisa.
Muchikamu chino, tinofanira dzima switch kuti natively, mushure mekuisa iOS 13.5, inoitwa.
Kana tikachinja pfungwa uye tinoda kutora chikamu muchirongwa ichi zvakare, isu tinongofanirwa kumisazve iyo COVID-19 Yekuzivisa Yekuzivisa switch.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 13 » Maitiro ekudzima COVID-19 yekutsvaga yekutevera
Iyo Pandora app yeApple Watch ikozvino inotsigira Siri
Hapana hutachiona hunogona neSpotify, 130M yakabhadharwa vashandisi